トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Go'aaminta jasiiradda ugu kulul galay qolkii martida pachinko ah
In tii pachinko ah, mashiinka pachinko waa wax soo saarka. Heshiiskaasi qowladda pachinko lagu daydo ah, marka la eego warshadaha kale, isku mid ah u noqon doonaa sida waa inaad soo bandhigaan alaabta. In qowladda pachinko ah, Shima aad rabto in aad qaadato nooc ka mid ah jasiiradda iyo faa'iido guud ee deggan ee ka jira in hawlgalka ah in aad rabto in aad si loo muujiyo taagan show ah, sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo in la beddelo meeleynta iyo dib u soo kabashada dhamaystiran ee jasiiradda.
ku xiran tahay in aad u geliya model kasta si jasiiradda kasta, waxaynu og nahay indhaha Ujeedada of model ah in qowladda pachinko ah. Model, taasoo u dhow goobta si
dekedda ugu hore, sidoo kale for model boor iyo dukaamo badan Xintai, inta badan waa model ah in aad rabto in aad si ay u helaan hawlgal deggan. Sababta oo ah waxa sidoo kale waa mid deggan sixitaanka ciddiyaha iyo set Horukon, Sidee wanaagsan, tan iyo mid caadi ah ee jasiirad haddii ay jiraan waxaa socda, waxaan qabaa karo in ay tahay Atsuishima gaarka ah.
dukaanka, ugu Atsuishima ma ah lagu daydo calaamad in Xintai, magaabo-Xintai iyo, waa jasiirad in waxa uu ku yaalaa waa model ah in si macquul ah loo jecel yahay.
waxaa waxaa sidoo kale inta badan loo isticmaalaa in ay dhacdo, laakiin sidoo kale waa faa'ido in yar tahay in ay Gase dhacdo marka la barbar dhigo model yar. Isagoo ka hadlayay in model noocan oo kale ah si fiican kaalinta jasiirada kasta, ama laga galo dambe ee dukaanka, waa u dhow xarunta of dukaanka. In kiiska halkaas oo jasiiradda
iyagoo eegaya dhirta kulul, fadlan isku day lagu doonayo in dareenka. iridda Back, taas oo u fudud in ay ku shaqeeyaan xitaa boos fiican ku lifaaqan indhahaaga. In dukaamada dhow xarunta ka mid ah, ilaa gudaha ee macaamiisha dukaanka, waxa aanu u taagan inuu yimaado isku aadka.
In gaaban, model ah in lagu xiro meel this, waa in ay inta badan waa model ah si ay u noqdaan at dukaanka taagan show a. Si taas loo gaaro, celcelis ahaan, ay u badan tahay in la sameeyo haddii ay dhacdo model ah, waxa ay inta badan sixitaanka dhidib waxaa sidoo kale sii dhidib caadiga ah.
Oo gasiirad ku taala si ay u, sidaas darteed xitaa socod wanaagsan dabeecadda, noqdaan wada dhakhso ah jaaniska hit weyn, sidoo kale noqon wixii u egtahay in ay ku keento jiidaya weerarada doonaa. Waxaan u muuqdaan in la qarin u muuqdaan inay la soo wareegto model iyo Xintai, laakiin sidoo kale shahaado qaar ka mid ah xasiloonida Waxaa aad, sababtoo ah, dhab ahaantii, waxaan u malaynayaa in ay tahay gasiirad oo ujeedadu tahay si sahlan ku dhex qowladda pachinko ah.
waa waqti ay tani tahay inay soo bandhigto, wuxuu noqon doonaa heshiis guud jasiiradda, jasiiradda lagu daydo heshiis ah, by aado, waa nooca ganacsiga waxa aad bay u kala duwan tahay in qowladda pachinko kasta. On jasiiradda of qaybo ka muuqda laga soo galo, sidoo kale waxaa jira qowladda pachinko u yimid inuu meel model ah isha Ujeedada dhan ah. By heerka lacagta caddaanka ah
, waxaa sidoo kale waa martida pachinko ah, iwm oo aan ka dhigi jasiiradda oo caynkaas ah. In the case of heerka furasho waa qowladda pachinko sare, maxaa yeelay, ma soo kabsaday qadar xataa weyn oo lacag ah waa in aanay noqon, waxa uu noqonayaa mid ay adag tahay in lagu daydo macaan badan calaamad.
xitaa oo cabirku yahay diinta sare, ee wax soo saarka iyo iibka waa tii pachinko wanaagsan, waxaa laga yaabaa in jasiiradda oo caynkaas ah. qowladda Pachinko ee ratio qaab beddelidda oo idinka mid ah, in ay dhacdo wax ka yar 3 yen, waa in had iyo jeer waxaa jira faraq waxaa lagu abaabulaa model ah in marka hore waxaa loogu talagalay oo ah hooska.
waxaan aaday dukaanka, First of dhan, isku day inaad si loo xaqiijiyo jasiiradda ku dhow xarunta jasiiradda xaqiijin oo albaabka dib u dhow iyo dukaamada ka mid ah tusaalayaasha boor. Waxa la yaab leh ujeedadoodu Waxaa laga yaabaa in jasiiradda loo qoondeeyey model ah. waa in aad.
waxaan aaday dukaanka, First of dhan, isku day inaad si loo xaqiijiyo jasiiradda ku dhow xarunta jasiiradda xaqiijin oo albaabka dib u dhow iyo dukaamada ka mid ah tusaalayaasha boor. Waxa la yaab leh ujeedadoodu Waxaa laga yaabaa in jasiiradda loo qoondeeyey model ah.